Hamro Online Khabar
हाम्रो अनलाईन टिभि
वीमा अभिकर्ता विशेष
भारतमा कोरोनाबाट एक जना मन्त्रीको मृत्यु, अवस्था झनै भयावह बन्दै
भाइरस नहुँदो हो त मान्छेले बच्चा जन्माउनुको साटो अण्डा पार्ने थियो
यो समय पुरा विश्व कोभिड–१९ को महामारीको चपेटामा छ । यसका लागि एक भाइरस जिम्मेवार छ, जसलाई नोभल कोरोनाभाइरस अथाव सार्स कोभ–२ नाम दिइएको छ ।
विश्वभर १ करोड २८ लाखभन्दा बढीलाई कोरोना, अमेरिकामा मात्रै साढे ३३ लाख संक्रमित
दुर्घटनापछि भाग्न खोजेका विकास दुबे र प्रहरीबीच मुठभेड
कुख्यात गुण्डा विकास दुबे सवार गाडी दुर्घटना, पूर्ण विवरण आउन बाँकी
बलात्कार र हत्यामा संलग्न ३ दोषीलाई मृत्युदण्डको फैसला
बीस वर्ष उमेरका ती पुरुषले किशोरीलाई गत वर्षको जुलाईमा बलात्कार गरेका थिए । त्यसै वर्षको नोभेम्बर १८ मा अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
मस्जीदमा भएकाे आक्रमणमा परी मारिनेको संख्या २३५ पुग्यो, राष्ट्रिय शोकको घोषणा
अफगान सेनाको कारबाहीमा १७ तालिबान मारिए
उत्तर कोरियाले जापानतर्फ फेरि अर्को मिसाइल छोड्यो
उत्तर कोरियाले राजधानी प्योङयाङबाट पूर्वी दिशामा जापानतर्फ फेरि एक मिसाइल छोडेको छ ।
मुम्बईमा भवन भत्कँदा ११ को मृत्यु
अमेरिकी सैन्य अखडामा कोरियाले आक्रमण गर्ने चर्चा
उत्तर कोरियाले प्रशान्त महासागरमा अमेरिकी स्वामित्वमा रहेको गुआम टापुमा हमला गर्ने तयारी गरिरहेको उत्तर कोरियाली समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् ।
चार अरब देशको १३ बुँदे माग कतारद्वारा अस्वीकार
११ असार, काठमाडौं । प्रतिवन्ध हटाउन चार अरब देशले राखेको १३ बुँदे सर्त कतारले अस्वीकार गरेको छ । यससँगै कतारमा देखिएको संकट अझै लम्बिने आशंका बढेको छ ।
पाकिस्तानमा तेल बोकेको ट्यांकर विस्फोट, १२३ जनाको मृत्यु
११ असार, काठमाडौं । पाकिस्तानको बहावलपुरमा तेल बोकेको ट्यांकर विस्फोट हुँदा कम्तिमा १२३ जनाको मृत्यु भएको छ । ट्याक्टरबाट चुहिएको तेल जम्मा गर्न मानिसहरुको भिड दागेको बेला आगलागी भएको थियो ।
कोलम्बियामा डुंगा दुर्घटना, ९ जनाको मृत्यु
१२ असार, काठमाडौैं । कोलम्बियामा डुंगा डुब्दा कम्तीमा ९ जनाको मृत्यु भएको छ भने २८ जना हराइरहेका छन् । उत्तर पश्चिम कोलम्बियामा १५० यात्रु सवार डुंगा डुबेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
ब्राजिलका राष्ट्रपतिमाथि लाग्यो घुस लिएको आरोप
१३ असार, काठमाडौं । ब्राजिलका राष्ट्रपति माइकल टेमेरमाथि घुस लिएको आरोप लागेको छ । राष्ट्रपतिले मिटप्याकिङ कम्पनीको मालिकसँग घुस मागेको अभियोजकको दाबी छ । यद्यपि राष्ट्रपति टेमेरले यो आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
ट्रम्प र मोदीबीच भेटवार्ता, एक-अर्काको प्रशंसा गर्दै के भने ?
१३ असार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता भएको छ । अमेरिका भ्रमणमा रहेका मोदीलाई राष्ट्रपति ट्रम्प र फस्ट लेडी मेलानियाले ह्वाइट हाउसमा स्वागत गरेका थिए ।
आईपीएल खेल्न सन्दीप यूएईतर्फ
नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेल्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) तर्फ लाग्नुभएको छ ।
सन्दीप क्यारेबियन लिग क्रिकेट खेल्न बिहीबार जाँदै
क्यारेबियन प्रिमियर लिग-सीपिएल क्रिकेटमा सन्दीप लामिछानेको सहभागिता निश्चित भएको छ। उनका म्यानेजर रमन सिवाकोटीका अनुसार सन्दीप बिहीबार क्यारेबियन क्रिकेट खेल्न प्रस्थान गर्दैछन्।
लुकाकु र सान्चेज दुवैले गरे गोल, युभेन्टसलाई पट्याउँदै इन्टर मिलान
इन्टर मिलान इटालियन सिरी ए फुटबलको दोस्रो स्थानमा पुगेको छ ।
बीमा गर्दा कुन कुन विषयमा ध्यान दिने ?
बिमितले बीमा गर्दा विभिन्न कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्दछ । कतिपय मानिसहरुले अभिकर्ताले भन्ने वित्तिकै बीमा गरेको पाइन्छ तर बीमा गर्दा आफुलाई पनि थाहा हुन जरुरी छ ।
ओलीको बोली आफ्नै लागि गलपासो !
नेपाल प्रहरीको उदाउँदो किरण: सर्बेन्द्र खनालको आगामि यात्रा
Editor in Chief: Prem Bc
Jumla road - 3, Surkhet
info@hamroonlinekhabar.com , advertise@hamroonlinekhabar.com
व्यवसायिक सिप विकास तालिम केन्द्र प्रा.लि द्धारा सञ्चालित नेपाली भाषाको सम्पूर्ण समाचार पोर्टल हो । यो विश्वभर रहेका सबै नेपालीको हो र नेपाली भाषाको सबैभन्दा राम्रो समाचार पोर्टलसमेत हो । नेपाली जनताको दशकौंदेखिको संघर्ष र त्याग तथा नेपाल आमाका हजारौं सर्वोत्तम छोराछोरीको बलिदानको बदलामा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाएका छौँ । यो युगीन परिवर्तनको रक्षा र नेपाली नागरिकको भलोका पक्षमा अहोरात्र पहरेदारी गर्न हामी प्रतिबध्द छौं । हाम्रो विश्वास के छ भने तपाईं एक अनुशासित नागरिकका रुपमा हामीसँग सदा जोडिइरहनु हुनेछ । सबैको र सबैभन्दा राम्रो नेपाली समाचार पोर्टल हाम्रो अनलाईन खवर डटकममा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ ।
© 2020 Copyright Professional Skill Development Pvt. Ltd. All rights reserved.